Waxa intaa dheer in marar badan wareejinta xiriirada ka telefoonka jir Samsung in mid cusub, waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale doonayaa xiriirada in la synched aad PC si aad u isticmaali kartaa sidii gurmad, bakhaar dhexe, ama database Master aad u isticmaali karto mar kasta oo aad rabto in aad xidhiidh ku daray in qalab cusub.
Inkasta oo aad ka phone Samsung wareejin karaan xiriirada si aad PC la isticmaalayo siyaabo dhowr ah, halkan waxaad ka baran doontaa labada siyaabaha ugu fudud in aad hesho shaqo lagu sameeyey si deg deg ah. Labadan hab oo kala yihiin:
A. Kala beddelashada Xiriirada via Gmail
B. Kala beddelashada Xiriirada la MobileGo Wondershare
Ayaa tallaabo-tallaabo tilmaamaha labada hab ee waxa lagu sharaxay hoos ku qoran:
Habkan wuxuu isticmaalaa Nidaamka laba tallaabo ah si ay u gudbiyaan xiriirada aad ka phone Samsung ah in aad PC. In talaabada ugu horeysa ee aad waafajinta aad xiriir telefoonka Samsung in xisaabta Gmail aad la xiriira, iyo in tallaabo labaad oo aad u dhoofiyaan xiriirada ka xisaab Gmail si ay u drive ka disk adag maxalliga ah ee aad PC. Xiriiro dhoofin karo file .csv ama .vcf ah, oo file ka dibna la keeno karo si codsi ah oo ku saabsan PC ama telefoonada mobile kala duwan siday u kala horreeyaan. Waxaad raaci kartaa tilmaamaha hoos ku siiyey in samaysay hawsha:
1. Power on your Samsung telefoonka gacanta.
2. Waxaad hubisaa in aad ku daray xisaabtaada Gmail si aad telefoon.
Fiiro gaar ah : Haddii aadan ku daray xisaab, si aad u samayn kartaa adigoo u socda Settings > Accounts > dar xisaabta , xulashada Google ka Add account uu furmo, oo markaas ka dib tilmaamo ka jiraan.
4. Ka liiska soo bandhigay ee astaanta, tuubada Xiriirada .
5. Laga soo bilaabo interface furay, ka jaftaa icon More (icon leh saddex dhibcood vertical) dhankiisii ​​top-midig.
6. Laga bilaabo menu soo bandhigay, tuubada xiriirada qalab dhaqaaq si ikhtiyaar.
7. On the xiriirada qalab dhaqaaq box in booda, ka jaftaa Google .
8. ee xiriirada dhaqaaq account Google sanduuqa, ka jaftaa OK .
9. Sug ilaa xiriirada ka telefoonka Samsung ayaa lagu wareejiyay in aad xisaabta Gmail.
10. Marka samaysay, gal si aad u computer.
11. Open browser web oo aad doorato wax ka dibna aad Gmail akoonka aad rabto in aad wareejin xiriirada ka mobile Samsung furo.
12. On furay Gmail interface account ee, riix badhanka hoos u jeeda arrow soo socda si icon Gmail ah.
13. Ka menu soo bandhigay, guji Xiriirada .
14. Marka ku Xiriirada bogga, ka Murayaad saxda ah, hubi checkbox ugu weyn ee ka sareysa in ay doortaan oo dhan xiriirada ku jira liiska.
15. Click ah More button ka sareysa.
16. Ka menu soo bandhigay, guji dhoofinta .
17. Laga soo xiriiro dhoofinta sanduuq oo u muuqata, hoos xiriirada kuwee baad doonaysaa inay u dhoofiyaan qaybta, guji in ay doortaan badhanka radio matalaya noocyada xiriirrada in aad rabtid in aad u dhoofiyaan. ( All xiriirada waxaa halkan soo xulay.)
18. way ka hoos baxeen qaab dhoofinta kuwee qaybta, guji in ay doortaan badhanka radio matalaya nooca qaab kaas oo aad rabto in aad dhoofin xiriir ah. ( format Muuqaalka CSV waxaa halkan soo xulay.)
19. Ugu dambeyntii riix dhoofinta button oo sug ilaa iyo xiriirada yihiin in loo dhoofiyo nooca file soo xulay.
Ka dib markii ay xiriir ah ayaa la dhoofiyo qaab la doortay, waxaad isticmaali kartaa habka soo jireenka ah si ay dajiyaan faylka barnaamijka la doonayo ama telefoonka ku darto xiriirada loo isticmaalo dheeraad ah.
Kala beddelashada xiriirada ka phone Samsung in PC iyo dib Wondershare MobileGo waa mid fudud marka loo eego habka kor lagu sharaxay. Inkasta oo waa in aad iibsato shati nuqul ka mid ah barnaamijka ay si buuxda u isticmaali dhan qaababka ay, Wondershare MobileGo mudan tahay boqolkiiba kasta oo aad maal waxa ku jira. Nidaamka tallaabo-tallaabo ah ee Samsung xiriirada si PC isticmaalaya Wondershare MobileGo wareejinta waxaa hoos ku qeexan:
1. Log on in aad Windows ama Mac computer la xisaabtami haysta xuquuqda maamulka. (A computer Windows halkan loo isticmaalo bandhig.)
2. Hubi in computer uu leeyahay internet-ka.
3. Fur browser web oo aad doorato wax.
4. Tag http://mobilego.wondershare.com/ iyo soo bixi version ugu dambeeyey ee Wondershare MobileGo sida madal your computer ee (Windows ama Mac).
5. Ka dib markii duuban, rakibi barnaamijka caadiga ah iyo ka dib markii la rakibey dhameystiray, bandhigista Wondershare MobileGo.
6. Marka waxaa lagu soo bandhigaa la interface ugu horreeya ee aad, xirmaan telefoonka Samsung in computer isticmaalaya cable xogta oo u yimid ay la socdaan waxaa la.
7. Sug Wondershare MobileGo in lagu ogaado telefoonka iyo rakibi darawallada ku haboon ku yaal.
Fiiro gaar ah : debugging USB waa in karti aad telefoon si ay u oggolaadaan MobileGo Wondershare in lagu ogaado telefoonka. Waxaad awood karaa debugging USB ah ee aad taleefan oo ag maraya in Settings > fursadaha Developer ka dibna hubinta debugging USB checkbox.
Fiiro Gaar ah : waxaa sidoo kale laga yaabaa in aad u baahan tahay in aad bixiso ogolaashahaaga si loo suurtogeliyo in aad telefoon in ay aaminaan computer ka oo ay xiran yahay.
8. Marka Wondershare MobileGo ogaadaa telefoonka, ka Murayaad bidix ee interface MobileGo ee kombiyuutarka, guji si loo xusho Xiriirada doorasho.
9. From sare ee Murayaad saxda ah, riix dhoofinta doorasho.
10. Laga soo bilaabo liiska soo bandhigay, guji qaab la doonayo ama barnaamij kaas oo aad rabto in aad dhoofin xiriir ah. (The in file vCard doorasho halkan loo doortay bandhig.)
11. On the Browse Wixii Folder sanduuqa, guji in ay doortaan folder caga lagu sameeyo ama mid cusub (adigoo gujinaya ku samee New Folder button) halkaas oo aad rabto in aad badbaadin faylka dhoofiyo.
13. Sug inta uu xiriir yihiin in loo dhoofiyo qaab la doortay file ama barnaamijka oo mar samaysay, oo ku saabsan dhoofinta guul sanduuqa riix OK . Haddii kale waxaad riixi kartaa Folder Open button in ay helaan faylka dhoofiyo.
14. Marka xiriiro waxaa laga dhoofiyey, waxaad iyaga dajiyaan karaa adigoo raacaya talaabooyinka aan kor ku ka 1 in 8 ka dibna sii raacaya tilmaamaha hoos ku qoran:
15. Laga sare ee Murayaad saxda ah, riix Import doorasho.
16. Laga soo bilaabo liiska soo bandhigay, dooran file ama barnaamijka ka meesha aad rabto in aad soo dhoofsadaan xiriir ah. (The ka file vCard doorasho halkan soo xulay.)
17. On furay Select xiriir aad rabto in aad soo dhoofsadaan sanduuqa, ay helaan faylka in aad rabto in aad soo dhoofsadaan oo guji Open ka hooseysa.
18. On the Xiriirada Import vCard sanduuqa (bandhigay oo keliya marka file vCard waa in la keeno), riix OK si ay u bilaabaan soo degida xiriirada meel caadiga ah.
Fiiro gaar ah : inaad iska baddasho goobta caga meesha aad rabto in aad xiriir la doonayo in la keeno (sida buugga gaar ah ee aad taleefan), waxaad riixi kartaa Select xiriir ah oo lagu xisaabiyo liiska hoos-hoos iyo dooran caga jeclaystay soo degida hor gujinaya ka OK button .
Marka laga beddeli karo badan oo la heli karo si ay u gudbiyaan xiriirada ka smartphone Samsung in aad PC, labada hababka kor lagu sharaxay yihiin, qiimo jaban uguna wanaagsan kuwa fudud si ay u isticmaalaan.
2 Methods si ay u gudbiyaan Music ka Mac si ay Android
Sida loo Copy OS in A New Hard Drive
> Resource > Transfer > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Samsung casriga ah si ay u PC